Ị nwere ike inyere m aka n'elu SEO atụmatụ kacha mma backlinks na 2016?
Kedu ụzọ ziri ezi nke kacha mma backlinks na 2016, karịsịa site na echiche nke SEO? Ekwenyere m na ugbu a, ụzọ kachasị mma iji jikọta ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ nke ọma iji mee ka ihe niile dịrị nke ọma ma nwee ike ịchịkwa ya. Ọtụtụ SEO na ọkachamara na ọkachamara ọkachamara kwenyere na inwe nyocha ugboro ugboro iji wepụ ihe niile agafeghị na njikọta atụmatụ ụlọ ọrụ ga-abụ isi ihe na-eme ka ụzọ SEO kachasị mma na backlinks na 2016. Ekwuru m na ọ dịghị usoro zuru ụwa ọnụ na Search Engine Optimization na 100% ekwesiri ike na ihe ọ bụla nwere ike ịchọta ị ga-atụ anya ya maka ọnọdụ ogo ọchụchọ gị ogologo oge - wintergarten reinigen van.
Zere Ụdị Missteps
Ọfọn, nanị ihe anyị nwere ike ime - Ekwesịrị m ịnakwere - bụ iji zere n'ụzọ doro anya ma ọ bụghị n'ụzọ zuru ezu. nke ụlọ njikọ. Ekwuru m na ị ghaghị iche echiche ugboro abụọ tupu ị na-emetụta ndị niile na-adịbeghị anya na aghụghọ na SEO, n'agbanyeghị agbanyeghị nkwa ha nwere ike ile anya mbụ. Ya mere, ị ga - echefuru echefu banyere "mgbanwe" dị otú ahụ, ma ọ bụrụ na ị na - eme ihe ngosi ma nwee nghọta doro anya - kpọmkwem ihe ị ga - eme na maka otu nzube dị mkpa. Ka o sina dị, ekwenyere m na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ onye ọ bụla nwere ike ịnweta ngosipụta a gosipụtara na iwuli profaịlụ njikọ dị ike maka weebụsaịtị ma ọ bụ blog. Echere m na e nwere ọtụtụ ụlọ akwụkwọ ochie na ụzọ eji eme ihe na 2016, ọbụna na-enweghị ụgwọ ọrụ otu SEO ma ọ bụ webmasters dị mma na-agagharị na ụlọ ọrụ ruo ọtụtụ afọ.N'okpuru ebe a, m ga-enwe nkowa dị mkpirikpi nke omume m kachasị elu ma hụ ọhụụ ebe ị ga-amalite ịmepụta njikọ dị mma iji meziwanye SEO gị n'ọtụtụ.
Categorize Profaịlụ Njikọ Gị
Ka anyị were ya na - enweghị ike - a ga - ekekọrịta njikọ niile dị n'ime "abụọ" n'ígwé. N'ikwu ya n'ụzọ doro anya, ihe niile na-adabere na isi mmalite ha na oge kachasị mma iji malite ịmalite ha n'ejighi anya enyo site n'echiche nke isi engines dị ka Google n'onwe ya. Nwee obi ike na ị ga-emerụ nsogbu na nhụjuanya kachasị na-adakwasị gị na mberede - ọ fọrọ nke nta na ọ dịghị oge. Iji nọrọ n'akụkụ nchebe, ị kwesịrị ịgbaso ụzọ ziri ezi nke omume site na mmalite. N'ụzọ dị otú a, ana m akwado ịkọwa ohere ụlọ ọrụ njikọ gị, dị ka ndị a:
Nkeji 1 Njikọ
Isiokwu ndị dị mkpa gbasara Wiki.
Ntinye ndekọ mpaghara.
Ndepụta azụmahịa azụmaahịa.
Ndepụta akwụkwọ edemede ndị na-apụta ìhè iji jikọta na ebe nrụọrụ weebụ gị ma ọ bụ blog (M nwere ike ikwu na ndị na-esonụ ga-agbalị mbụ - Ezinearticles. com, GoArticles. com, ma ọ bụ Articlebase. com).
Nkebi 2 Njikọ
Ịmepụta mgbasa ozi mmekọrịta ọha mmadụ na ịmalite profaịlụ profaịlụ na ntanetị kachasị dị ka Facebook, Twitter, LinkedIn. (Ngosipụta: ị nwere ike ịnwale iji FanPageRobot, ngwá ọrụ nwere ike iji tinye njikọ gị na ndị na-ewu ewu mgbasa ozi na-ewu ewu na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ onwe gị.
Biputere na ntinye akwukwo iji nwetaghachi backlink na nloghachi).
Na-ekwu okwu banyere blọọgụ dị mkpa.
Nwee aka na mkparịta ụka na-ekpo ọkụ na blogs, forums, na weebụsaịtị maka Ajụjụ & Azịza. (Mmetụta: tupu ihe ọ bụla ọzọ, ana m akwado ịnwa ụlọ azụ backlinks site na Quora na LinkedIn Answers).
Ahịa onyonyo na YouTube nke abụọ agara na ebe nrụọrụ weebụ agaghị eleghara anya. Akwụsịla ịmepụta ọwa vidio gị ma mee ezigbo ahịa n'ịntanetị na ịkwalite aha aha, na-ejikọta ọtụtụ njikọ bara uru n'otu oge. (Mmetụta: ị nwere ike ịme ka di na nwunye nwee njikọ - ozugbo ịdejupụta isi ngalaba nke profaịlụ gị maka ịhapụ ihe nkwado azụ na ebe nrụọrụ weebụ ma ọ bụ blog na ndabara).